Ny FAQ an'ny NCS ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny / mpiambina - Elector Society
Aiza no ahitako lisitry ny entana?
Aiza no hisy ny fandaharako?
Afaka manoratra amin'ny NCS miaraka amin'ireo namako ve aho?
Azo alaina ao amin'ny NCS ve ny finday?
Mila mitondra saka matory ve ny tanora?
Inona no sakafo omena?
Ny lisitry ny entana dia tafiditra ao amin'ny NCS Summer / Autumn Guide izay nandefasana ny tanora sy ny ray aman-dreniny / mpiambina amin'ny toerana voamarina *. Maniraka azy ireo isika mandritra ny iray volana mialoha ny fanombohan'ny programa.
Raha mbola tsy nahazo ny NCS Summer / Autumn Guide ianao, dia azonao atao tsindriana ny rohy etsy ambany mba hijerena ny dikan-teny an-tserasera izay ahitana ny lisitry ny fanangonana.
Azonao atao ny mitondra valizy iray sy kitapo iray andro miaraka aminao. Ny kitapo fanampiny dia tsy maintsy havela hijanona, koa azafady mijanona ao anatin'ny fetran'ny entana. Azafady miezaka ny tsy hampiasa valizy lehibe noho ny habaka fangatahana voafetra.
Ny tanora dia tsy tokony hitondra ny zavatra voarara toy ny alikaola, zava-mahadomelina tsy ara-dalàna, zavatra tsy ara-dalàna, penknives na fitaovam-piadiana ao amin'ny NCS. Mangataka ny tanora hanaja ireo fitsipika ireo isika raha hisy ny vokany raha toa ka hita fa manana azy ireny izy ireo.
Mariho fa tsy afaka manome antoka ny fananana isika. Noho izany antony izany, manoro hevitra izahay fa tsy hitondra zavatra sarobidy na zava-tsarobidy tsy ilaina.
Ny Programa NCS tsirairay dia ao amin'ny UK.
Nandritra ny taona lasa, dia nandeha nankany amin'ny toerana toa an'i Ekosy, Cumbria, Kent ary Pays de Galles ny Phase 1.
Ny toeran'ny 2 sy 3 dia mazàna no akaiky kokoa ny faritra misy ny toeran'ny tanora, matetika any amin'ny lavitra lavitra ny tranony na ny sekoly, saingy miovaova izany ary ny tanora dia mety lavitra kokoa.
Handefa timetables miaraka amin'ny fampahalalana bebe kokoa momba ny toerana marina isika eo ho eo iray volana mialoha ny daty fanombohana ny fandaharana tsirairay rehefa voamarina ny toerana rehetra.
Ny mpandray anjara dia mila mivezivezy mankany amin'ny toeram-pivoriana izay matetika ao anatin'ny faritra na eo akaikin'ny faritra misy azy. Dia handamina fitsangatsanganana haka tanora any amin'ireo toerana izay lavitra kokoa. Ny tanora sy ny ray aman-dreniny na ny mpiambina dia tompon'andraikitra amin'ny fandaminana ny diany mankany amin'ny toeram-pivoriana ary avy amin'ny valin'ny fiverenana amin'ny fotoana voatondro ao anatin'ny fandaharam-potoanany.
Afaka manoratra miaraka amin'ny namana ny tanora, ary raha toa ka mihatra amin'ny daty mitovy amin'ny faritra iray ihany izy ireo ary mifantina ny fahaizan'ny Phase 2, dia manana safidy tsara izy ireo amin'ny fandaharana mitovy. Indray mandeha izy ireo dia samy nanao sonia, ny tanora dia afaka mifandray amin'ny fangatahana ny hiditra amin'ny fandaharana iray na hizara efitrano iray. Mila mahafantatra ny anaran'ny namana tsirairay isika ary hanao izay tsara indrindra vitantsika mba handinihana izany. Na dia tsy azontsika antoka aza izany, dia hampitombo ny vintany ny fisoratana anarana aloha!
NCS dia fomba tsara iray hihaonana ireo olona vaovao ary hanao namana vaovao! Jereo eto ny video.
Tanora maro no mahita fa na dia napetraka tao amin'ny ekipa samihafa na ny onjam-pifaliana avy amin'ny namany aza izy ireo, dia manolo-tena ny hihaona amin'ny olona vaovao amin'ny alalan'ny asa fanorenana ny ekipa ary ny mpanolo-tsain'izy ireo dia olona tena mionona rehefa tsy mahomby. Mamela tanora maromaro ihany avy amin'ny sekoly iray isaky ny fandaharana isika, noho izany dia ny tanora no hifanome tanana voalohany. Mandritra ny fandaharana, ary indrindra indrindra any am-piandohana, dia hisy lalao ekipa maro sy mpizahazo mba hahazoana antoka fa hahafantatra ny tanora hafa ao amin'ny ekipany ny tsirairay.
Ankoatra izany dia maro ireo tanora no milaza fa ny iray amin'ireo faritra tsara indrindra amin'ny programa NCS dia nivory tamin'ireo olona vaovao maro ary namorona namana vaovao. Tsindrio eto raha te hahita ny sasany amin'ireo traikefa niainan'ireo mpandray anjara teo aloha. Tsy afaka manome fampahalalana momba ny ekipan'ny tanora isika, satria ny ekipa tsirairay isaky ny programa dia omena roa andro monja mialoha ny daty fandaharana. Ny tanora dia hahalala ny ekipany amin'ny andro voalohan'ny fandaharana.
Mariho fa ny tokotanin'ny NCS dia lahy sy vavy ary tsy azonay atao ny mankasitraka ny fangatahana fizarana karajia ho an'ny tanora avy amin'ny samy lahy samy vavy.
Azo alaina ao amin'ny programa NCS ve ny finday?
Ny tanora dia avela hitondra ny findainy (sy ny mpamatsy) miaraka aminy amin'ny programa NCS ary afaka mampiasa azy ireo rehefa tsy mandeha ny asa atao (mampiasa ny finday mandritra ny fotoana iasan'ny asa atao). Mariho fa mety tsy hisy foana ny fidirana amin'ny finday, indrindra mandritra ny Phase 1 izay matetika mipetraka any ambanivohitra.
Ny trano fandraisam-bahiny rehetra dia tonga miaraka amin'ireo fanamiana ilaina, toy ny fidirana amin'ny solosaina, ny orana, sns. Na inona na inona karazana trano ao amin'ny fandaharan'asa manokana, ireo mpandray anjara dia afaka mahazo miditra amin'ny herinaratra ary tokony ho afaka hamaly ny findainy. Ny fahafahana miditra dia mety voafetra ho an'ny trano fonenana.
Mariho fa tsy afaka manome antoka ny entan'ny entana isika fa ny tanora izay mitondra ny findainy dia manao izany amin'ny tenany manokana.
Tsia, tsy mila mitondra kitapo matory ny tanora. Ny trano fandraisam-bahiny rehetra dia tonga amin'ny lamba firakotra, ao anatin'izany ny trano fonenana sy ny varotra. Manolotra fandriana ihany koa izahay mandritra ny tobim-pahasalamana izay ataon'ny tanora mandritry ny fizarana 1.
Ny sakafo sy ny zava-pisotro rehetra dia homena mandritra ireo ampahany amin'ny toerana ipetrahan'ny fandaharam-potoana (rehefa miala ny trano ny tanora). Tsy maintsy mitondra sakafo antoandro fotsiny ianao amin'ny andro voalohany amin'ny Phase 1 (sy ny Phase 2 miankina amin'ireo fandaharana, azafady jereo ny fandaharam-potoanao).
Raha mbola fantatsika momba ny zavatra ilain'ny tanora mialoha isika, dia afaka manome ny sakafo manokana indrindra ho an'ny fitakiana ny sakafo, anisan'izany ny halal, kosher, vezetarian, vegan, ary gluten-free sakafo, ary ho an'ny karazana sakafo mahazatra. Ireto misy ohatra momba ny sakafo izay azonao atao mandritra ireo faritra mitoka-monina. Hisafidy ny safidy:
Ho an'ny programa amin'ny fahavaratra
Dingana 1 (trano):
Mampidira sakafo matsiro amin'ny andro voalohany. Ny sakafo avo lenta dia avy amin'ny toeram-piompiana ivelan'ny trano.
Ny sakafom-bozaka: sereal, sakafo maraina vita sakafo, papango
Sakafo: sandwiches, voankazo, voankazo
Dinner: sakafo matsiro (ohatra pasta, pizza, karaoty, chilli), salady, dessert
Dingana 2 (trano fonenana)
Jereo ny fandaharam-potoanao mba hijerena raha mila mitondra sakafo matsiro ianao mandritra ny andro voalohany. Ny sakafo dia avy amin'ny The Challenge ary ny tanora dia matetika mahandro sakafo ho an'ny tenany amin'ny maha-traikefa azy ireo tsy miankina.
Fiatoana: sereal, toast
Mandritra ny fisakafoanana: fisafidianana sakafo mahasalama voafidy sy voaorina ho ekipa (ohatra sausages sy potato mashed, stir-fry, pizza)
Dingana 3 (tsy fonenana)
Atero azafady ny sakafonao manokana. Tsy omena sakafo.
Ho an'ny programan'ny fararano
Dingana 1 (trano fonenana)
Fandresena 2 sy 3 (andro fanaovan-gazety, mijanona ao an-trano amin'ny alina)
Aiza no hatory ny tanora mandritra ny dabilio?
Inona no mitranga amin'ny takarin'ny fampahalalam-baovao?
Ohatrinona ny sarany mandray anjara amin'ny NCS?
Hahomby ve ny fitondran-tenan'ny tanora sasany?
Iza no tompon'andraikitra amin'ny tanora eny an-kianja?
Hiditra amin'ny fianarana zatovo ve ny fandraisana anjara amin'ny NCS?
Ahoana no ahafahako mahazo ny zanako?
Aiza ny tovolahy no matory mandritra ny dingam-ponenana?
Misy karazana fisakafoana maromaro azo isafidianana mandritra ny NCS (ohatra efitrano fisakafoana, trano lay, varotra, ary ny sisa), ary ny karazana trano dia miovaova amin'ny programa. Ny antsipiriany momba ny trano sy ny toerana ho an'ny fandaharana tsirairay dia alefa amin'ny mpandray anjara eo ho eo iray volana mialoha ny daty fandaharana.
Ny trano fandraisam-bahiny dia mitazona ivontoerana fandraharahana any ivelan'ny trano, tobim-pampianarana any an-tsekoly na mpanome trano hafa ary misy ny fiarovana misy eo an-toerana mba hitazonana ny mponina ao aminy ho azo antoka araka izay azo atao. Ny mpandray anjara lahy sy vavy dia misaraka amin'ny fiarahan'ny lahy sy vavy ary tsy mahazo miditra any amin'ny efitrano hafa.
Ny trano fialan-tsasatra dia misy ny fanamiana ilaina toy ny fidirana amin'ny orana sy ny solosaina. Ny trano sasany, anisan'izany ny efitra fandroana, dia azo zaraina miaraka amin'ireo tanora hafa fa hiaraka amin'ireo mpandray anjara mitovy amin'io ihany.
Na dia tsy misy fotoana voafetra aza fa mila resin-tory ny tanora, ny tanora rehetra dia tokony ho ao anatin'ny trano fonenany amin'ny 10.45pm. Manoro hevitra isika fa ny torimaso tsara dia tsara ho an'ny tanora mba ahafahana mankafy ny andro manaraka!
Ho an'ireo fandaharana manomboka amin'ny fialantsasatry ny fahavaratra:
Mandritra ny dingana 1, mijanona any amin'ny toeram-pivarotana any ambanivohitra ny tanora. Mety tsy mitovy ny karazana trano. Mety ho tranom-bahiny, miaraka amin'ny dia fitetezam-paritra mandritra ny alina, fa mety ho tranolay na varotra ihany koa. Ny antsipiriany ho an'ny fandaharana tsirairay dia alefa amin'ireo mpandray anjara eo amin'ny iray volana mialohan'ny daty voalohany.
Mandritra ny dingana 2, ny tanora dia hiaina fiainana tsy miankina amin'ny fialana an-trano sy ny sakafo mahavelona. Indraindray dia mety tsy mitovy ny trano fisakafoanana (ohatra, mety ho trano fialan-tsasatra na tranombarotra na alika), ary ny antsipiriany ho an'ny fandaharana tsirairay dia alefa amin'ny mpandray anjara eo ho eo iray volana mialoha ny daty fandaharana. Mandritra ny dingana 3, ny tanora dia hijanona ao an-trano isaky ny alina.
Ho an'ireo fandaharana manomboka amin'ny antsasaky ny fe-potoana:
Mandritra ny dingana 1, ny tanora dia hitoetra ao amin'ny foibe ivotoerana any ambanivohitra. Mety tsy mitovy ny karazana trano. Mety ho tranom-bahiny, miaraka amin'ny dia fitetezam-paritra mandritra ny alina, na mety ho ny sarety (trano lay), na trano fisakafoanana. Ny antsipiriany ho an'ny fandaharana tsirairay dia alefa amin'ireo mpandray anjara eo amin'ny iray volana mialohan'ny daty voalohany. Ireo zavatra ilaina rehetra, toy ny oram-panala sy ny fametahana herinaratra, dia ho azo. Ho an'ny sisa amin'ny programa (Phase 2 sy 3), ny tanora dia hijanona ao an-trano isaky ny alina.
Ny takarivan'ny fampahalalam-baovao dia fahafahana mandray anjara amin'ireo mpandray anjara sy ireo ray aman-dreny na mpiambina mba hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba ny NCS ary hametraka fanontaniana izay mety ho azony momba ny fandaharana. Io ihany koa no fotoana ahafahan'izy ireo mihaona amin'ireo tanora hafa izay handray anjara amin'ny programa iray sy ny ray aman-dreniny na ny mpiambina azy.
Hanasa anao izahay ho an'ny takarivan'ny Information rehefa voamarina ny toerana. Matetika dia mitazona herinandro 2 alohan'ny hanombohan'ny fandaharana. Manoro hevitra izahay fa ny fanatrehanao ho mpandray anjara taloha dia nahita fa tena ilaina izy io, fa tsy an-tsitrapo kosa izany. Na ahoana na ahoana, dia handefa anao ny torolàlana mivantana amin'ny Summer / Autumn mandritra ny iray volana mialoha ny daty fandaharam-potoana amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny lahatsorany, matetika miankina amin'ny safidy voafidy amin'ny fampiharana.
Mino izahay fa ny taona rehetra 15-17 azo ekena dia mendrika handray anjara amin'ny NCS ary sarobidy be ny vola. Ny Governemanta dia manasa mihoatra ny £ 1,000 ho an'ny mpandray anjara mba hahafahantsika miantoka fa ny fandaharanasa dia mandoa vola mihoatra noho ny £ 50 saram-pandraharahana, na ianao mihatra amin'ny NCS The Challenge na ny NCS Trust. Ny mpandray anjara dia mandany fotoana lavitry ny trano miaraka amin'ireo asa rehetra voarakotra. Anisan'izany ny trano fonenana, ny sakafo (rehefa mandeha ny fotoana) ary fitaovana.
Matetika izahay no manome tolotra manokana ho an'ireo sekoly izay tsidihinay. Raha manana fanontaniana ianao momba ny fanampiana ara-bola na ny fandoavam-bola, azafady mba mifandraisa aminay.
Ny tanjon'ny fanamby dia ny manohana ireo olona manana fitondran-tena sarotra mba ahafahan'izy ireo mandray anjara sy mahazo ny tsara indrindra avy amin'ny NCS.
Satria ny fiarovana no tena zava-dehibe indrindra, dia avereno jerena ny fampiharana ny tanora tsirairay, indrindra ny fandinihana ny fanazavana momba ny fitsaboana sy ny fanohanana.
Raha lazaina amintsika fa misy tanora manana olana amin'ny fanarahana fitsipika mazava sy fetra, dia hifandray amin'ny ray aman-dreny na mpiambina isika mba handinika izany. Amin'ny tranga sasany dia hanatona sekoly, matihanina na manam-pahaizana hafa ho amin'ny fampahalalana bebe kokoa. Avy eo isika dia manapa-kevitra momba ny tovolahy sy ny fanohanana azy ireo amin'ny NCS. Raha ilaina, dia hametraka fanampiana fanampiny ho an'ny tovolahy isika.
Amin'ny toe-java-misy rehetra, dia hahatonga ny mpiasam-panjakana mahatsapa ny fihetsika henjana iray mba hahafahan'izy ireo manohana ny tanora sy ny ekipa iray manontolo. Manana fitsipi-pitondran-tena koa isika. Manazava izany amin'ny tanora aty am-piandohan'ny fandaharana isika ary manantena azy ireo hanaraka azy. Ny fitsipiky ny fitondran-tena dia misy fitsipika sasantsasany mikasika ny fitondrantena izay antenaintsika amin'ny fandaharana, anisan'izany ny fitsipika momba ny fiarovana, ny lalàna, ary ny fanajana ary ny olon-kafa.
Raha manitsakitsaka ny fitsipi-pitondran-tena ny tanora iray na tsia, dia handinika ny toe-javatra ny manampahefana ary hanapa-kevitra amin'ny hetsika tsara indrindra. Amin'ny toe-javatra sasany dia mety hangataka ilay tanora hiala amin'ny fandaharana isika.
Ny fiarovana sy ny fahafinaretan'ny mpandray anjara dia tena zava-dehibe. Ny NCS dia atolotra ho any Angletera sy Irlandy Avaratra amin'ny alalan'ny tambajotram-pihetseham-pianarana misy ny fikambanan'ny tanora sy ny fikambanana, anisan'izany ireo fikambanana, fiombonam-piaraha-monina, asa an-tsitrapo, fiarahamonina, orinasa sosialy (VCSE) ary fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Ny mpiasan'ny NCS dia notsidihin'ny DBS (teo aloha CRB) ary manana fiofanana mety hiarahana amin'ny tanora.
Ny hetsika rehetra dia azo antoka fa mety hampidi-doza sy hanaraha-maso ny fampiofanana voafantina sy ny mpampiofana voafidy tsara ary ny fandaharam-potoana dia ny hatsaran-toetra azo antoka eo an-toerana sy eo an-toerana.
Hiditra amin'ny fianarana fianarana fianarana zatovo ve ny fandraisana anjara amin'ny NCS?
Tsia. Ny fandaharam-potoan'ny fahavaratra NCS dia atao mandritra ny fialantsasatry ny fahavaratra. Ny fandaharam-potoan'ny fararano sy lohataona fohy dia mety hitranga mandritra ny fialantsasatry ny fararano na ny lohataona.
Ny fandaharanasa fahavaratra NCS dia mitranga mandritra ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra. Ny fandaharam-potoan'ny fararano sy lohataona fohy dia mety hitranga mandritra ny fialantsasatry ny fararano na ny lohataona.
Ny zatovo dia afaka manoratra ny fahalianany handray anjara amin'ny alàlan'ny fampiasana ny takelaka famantarana ao amin'ny tranokalantsika na amin'ny fiantsoana 0114 2999 210 na amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny mpitantana ny NCS Richard, ao amin'ny richard.r@element.li
Rehefa tapitra ny fisoratana anarana, dia handefa antsipiriany bebe kokoa momba ny tetikasa manokana nosoratany ianao.